ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုကို IS အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက် မှုကြောင့် လူ (၇၀) သေဆုံး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုကို IS အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက် မှုကြောင့် လူ (၇၀) သေဆုံး
Pakistani volunteers move the bodies of victims afterabomb explosion atagovernment hospital premises in Quetta on August 8, 2016. At least 20 people have been killed afterabomb went off atamajor hospital in the southwest Pakistani city of Quetta, an AFP reporter and officials said, with fears the death toll could rise. / AFP PHOTO / BANARAS KHAN
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုကို IS အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက် မှုကြောင့် လူ (၇၀) သေဆုံး
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းက ဆူဖီဘုရားကျောင်းကို IS စစ်သွေးကြွတစ်ဦးရဲ့ အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက် မှုတစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားကျောင်းတက်နေချိန် တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့် အနည်းဆုံး လူ (၇၀)ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သေဆုံး ခဲ့သူတွေထဲမှာ ကလေးငယ် (၃၀)ကျော်နဲ့ အမျိုးသမီးများစွာလည်း ပါဝင်နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု လို စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာ တစ်ပတ်အတွင်း မြင့်တက်လာနေ ပြီး လူပေါင်းများစွာ သေဆုံးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ် နေတာပါ။
လက်ရှိ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကို ကယ်ဆယ် ရေးအဖွဲ့တွေ၊ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့တွေကို စေလွှတ်ထားပြီး ဆူရှီဘုရားကျောင်းကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်သူဟာ စစ်သွေးကြွ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေ က ပြောပါတယ်။
Previous articleNLD အစိုးရလက်ထက် ရာဇဝတ်မှုနဲ့ တရားမမှု မှုခင်းအရေအတွက် ပိုများလာ
Next articleကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေ မှန်ကန်တဲ့ တွေးခေါ်မှုနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းစဉ်တွေ ရှိဖို့လို